September 2017 – dulmidiid
Kulan gaaaar ah oo ka dhacday magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa looga hadlay dhibaatada ay reebtay iyo saameynta ka dhalatay Abaartii ku dhufatay qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Kulanka oo ay ka qeybgalleen mas’uuliyiin kala duwan ayaa
Heshiis dhaxmaray dowladda Soomaaliya iyo hay’adda duulimaadyada caalamiga ah ICAO ayaa leysku afgartay in ku dhawaad 30 kaddib Soomaaliya lagu wareejiyo maamulka hawadda. Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka soconayay dhismaha qeyb ka
Madaxweynaha dalka Uganda oo ku baaqay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab
Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Museveni ku baaqay in la xoojiyo dagaalka ka dhan ka ah Ururka Al-shabaab kaddib kulan uu magaalada New York kula qaatay Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain Boris Johnson. Labada Mas’uul waxay magaalladda New York kaga qeyb
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax saakay ka dhacay nawaaxiga Isgoyska Maanabooliyo , dhanka degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. Gaarigan ayaa la sheegay in lagu xirey walxaha qarxa, waxaana saarnaa nin magaciisa lagu soo koobay Abuu Shiine, misane caan
Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidanka Kenya ay saaka isaga baxeen degmadaas, oo labadii sano ee la soo dhaafay ku sugnaayeen. Ciidamada Kenya ayaa tan iyo xalay isu qaban qaabinayay ka
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey ayaa markii u horeysay ka hadlay lacagta xubinimada Qaramada Midoobey ee lagu leeyahay Soomaaliya oo ah qaaraanka dal walba laga rabo inuu bixiyo, si uu cod ugu yeesho shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey.